Sina: manampy an’ilay mpandroso sakafo nahafaty mpiasam-panjakana iray ireo mpampiasa aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Mey 2009 4:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, عربي, English
Deng Yujiao, mpandroso sakafo iray mipetraka any amin'ny faritanin'i Hubei nanindrona antsy mpiasam-panjakana iray ary nandratra iray hafa raha nanohitra ny fikasan'iretsy farany ny hanao firaisana ara-nofo taminy. Ny resaka mandeha eo anivon”ny aterineto dia tsy misy fitserana manoloana ilay razana fa manohana amin'ny ankapobeny an'ilay vehivavy 21 taona, amin'ny filazana azy ho Yang Jia iray vaovao nijoro tamin'ny fahamarinana.
Lehibe ao amin'ny birao fampiroboroboana ny fampiasam-bola ao Canton i Deng Guida, ilay lehilahy maty. Nandeha niaraka tamin'ny namany roa izy mba hanararaotra fanorana tao amin'ny Dream City, ary tany no nahitany ilay mpandroso sakafo. Nangataka ‘fikarakarana manokana’, midika hoe ‘filàn'ny nofo’ izy io any Sina, izy ireo saingy nolavina izany.
Raha ny voalaza dia namoaka vola taratasy avy tany am-paosiny i Deng Guida ary nokapohiny tamin'iny ny lohan'ilay tovovavy. Nahatsiaro menatra noho izay fihetsika izay, ary niezaka nandositra nivoaka ny trano i Deng saingy indroa natosik'ilay niharam-bono ho eo ambony sezalava iray izy. Nahita antsy ilay tovovavy ka notsindroniny ny tendan'ilay lehilahy, nitarika ny fahafatesany sy nandratra ny iray tamin'ireo namany.
Fotoana fohy taorian'izay dia niantso ny polisy ilay vehivavy ka nitolo-batana hotanana an-tranomaizina.
Vantany vao vaky ny resaka dia niteraka avy hatrany resa-be teny amin'ireo toerana falehan'ny besinimaro. Ny voalohany dia ny fahafantàrana raha tokony ho raisina ho fiarovan-tena ny fihetsik'ilay tovovavy. Na dia misy amin'ireo mpahay làlana aza no manaiky fa mety ho meloka izy, ny sasany ao amin'ny Xing-Dao Daily, gazety mpampita vaovao any Hong Kong, kosa miady hevitra:
Nangataka ‘fikarakarana manokana’ ilay mpiasam-panjakana, nefa nolavina! Natosiny tamin-kerisetra ho eo ambony sezalava i Deng, izay fihetsika azo lazaina ho saika hanolana azy. Nisy izany ny fanohintohinana ny zo maha olona an'i Deng ary saiky niteraka ratra lehibe teo aminy. Fiarovany ny tenany izany ilay famonoany tamin'ny antsy ary noho ilay tranga tao anaty hamehana….tsy tokony tondroina ho meloka izy!
Maro tamin'ireo mponin'ny aterineto no nanandra-peo momba an'i Deng. Yi Li in Tianya dia nitondra fanamarihana momba ny vaovao, manao hoe,
Deng Yujiao, hendry ianao. Midera anao aho ary manohana anao, ary manan-javatra alain-tahaka avy aminao. Masiana indrindra.
Ankoatra izay, ny tantarany dia voasoratra anaty lahatsoratra fohy amin'ny teny Sinoa tranainy izay ampiasain'ireo mpahay ny tantara fahiny hiraketana ho ohatra ny nasehon'ny olona iray nanam-pahasahiana. Ho an'ireo mahay tsara ny Sinoa, ity ilay lahatsoratra:
jy_xyp dia milaza fa:
Sambatra aho raha tovovavy toy izany no azoko ampakarina ho vady.
Zava-tsarobidy ny fahadiovana [ maha-virjiny] any Sina, ary maro ireo tantara maneho ny fomba niarovan'ireo vehivavy ny haja sy voninahiny. Eto ny teo-po nidera tovovavy iray niaro ny fahadiovany dia miharo fankahalàna ireo mpiasam-panjakana mpanao kolikoly ihany koa.
Ao amina'ny People.com, i Sun Xiaobo mpitoraka blaogy iray dia manontany hoe:
Fomba nanao ahoana moa no tena nanànan'ireto mpiasam-mpanjakana ireo vola be toy izao? Nandritry ny fifanolanana dia novelesin'ilay nidiran'andro taminà antontam-bola taratasy ny lohan'ilay tovovavy. Raha avy amin'ny karamany, ahoana no hananan'ny mpiasam-bahoaka iray vola be toy izany holanilaniana fotsiny ka tsy hampanontany tena sy hiteraka ahiahy? Volam-bahoaka ve io sa vola nahodina angamba?
Ahoana no ahafahan'izy ireny mandeha matetika any amin'ny toeram-pialamboly toy izany sy adala tafahoatran'ny ‘fikarakarana manokana’ toy izao?
Mpitoraka blaogy, mponin'ny aterineto sy avara-pianarana maro no niara-nanao hetsika ho fanohanana an'i Deng Yujiao. Taratasy iray misokatra ho an'ny daholobe manentana ny rehetra handefa ny teny fampaherezana avy amin'izy ireo ho an'i Deng, izay migadra ankehitriny, no hita any anaty aterineto any milaza an'i Deng ho ‘heroine’. Maro koa anefa ireo nihevitra fa mety ho lalaovin'ny polisy ny porofo [ny tena zava-misy marina] mba hanampiana ny fitsarana hanameloka an'i Deng.
Tamin'ny tatitra sava-ranonando, nambara fa i Deng dia tsy dia milamina ara-tsaina loatra. Sady koa, nolazain'ny polisy fa ny fitaovana nampiasain'i Deng dia antsy fandidiana voankazo fa tsy ny fitaovana fikarakarana hoho tokony hampiasainy amin'ny asany rehefa mikarakara ny hohon'ireo mpanjifany. Momba io teboka iray io, ny mpitoraka blaogy Zhou Zhongming dia nanoratra lahatsoratra iray:
Voalohany, tsy miresaka mihitsy ilay antontam-bola taratasy ny polisy!
Faharoa, Lazain'izy ireo fa antsy fandidiana voankazo ilay fitaovana, fa tsy fikarakarana hoho! Efa misy fahasamihafàna kely izay satria ilay izy fitaovana fikarakarana hoho, ary maneho izany fa tao anaty fisavoritahana ilay tovovavy no niaro ny tenany tamin'izay zavatra tratry ny tànany teny. Raha antsy fandidiana voankazo ilay izy, midika izay fa nandeha naka ilay antsy tany ananona tany ilay tovovavy ary namono ilay mpiasam-panjakana fa tsy fihetsika fiarovan-tena tsotra fotsiny
Ery ambanimbany indray, lazain'izy ireo fa nahitàna fanafody fitsaboana aretin-tsaina tao anaty pôketran'ilay tovovavy. Dia tena tsikombakomba ratsy entina hiarovana ny lazan'ny mpiasam-panjakana fotsiny izao e! Azon'izy ireo atao mihitsy aza ny mandefa ilay tovovavy ho any amin'ny toby fitsaboana marary saina. Ny tsirairay anefa samy mahalàla fa ratsy lavitra noho ny fanamelohana ho faty ny fandefasana any amin'ny toerana [an'ny Fanjakana] natao hametrahana ny marary saina.
Manome sarisary momba izay heveriny ho fehin-kevitra havoakan'ny polisy ilay mpitoraka blaogy: ilay tovovavy, noho ny aretin-tsainy sy ny fahavononana hamono, dia nanatsatok'antsy ireo mpiasam-panjakana roa taminà antsy efa nomanina indrindra ho amin'izany.
Dia ho marina ve ny filazàna toy izany? Miandry izay valin-teny farany avy amin'ny polisy ny mponin'ny aterineto rehetra.
5 ora izayAzia Atsinanana